कृतिम सूर्य बनाएर विश्वलाई नै चकित बनाए चीनका वैज्ञानिकले, प्रकृतिलाई नै चुनौती दिएर के गर्न खोजेका ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
कृतिम सूर्य बनाएर विश्वलाई नै चकित बनाए चीनका वैज्ञानिकले, प्रकृतिलाई नै चुनौती दिएर के गर्न खोजेका ?
विज्ञानमा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्ने क्रममा चिनियाँ वैज्ञानिकहरु कृत्रिम सूर्य बनाउन पनि सफल भएका छन् । प्रकृतिलाई पटक पटक चुनौती दिने काम गरेको चीनले यसअघि पनि आफ्नै देशमा सञ्चालन भएको ग्रीष्मकालीन औलम्पिक खेलमा आकाशको बादल हटाएर एकाएक विश्वलाई चकित तुल्याएको थियो ।
अझ रोचक कुरा त के भने चीनले बनाएको त्यो कृत्रिम सूर्य वास्तविक सूर्यभन्दा ६ गुणा बढी तातो हुनेछ । यसअघि चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले सन् २०२० सम्ममा कृत्रिम चन्द्रमालाई आकाशमा चम्काउने दाबी गरेका थिए र त्यसमा सफलता पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । सौर्यमण्डलको सूर्यको केन्द्रको तापक्रम डेढ करोड डिग्री सेल्सियस छ ।
जबकि चीनले बनाउने नयाँ सूर्यको केन्द्रको तापक्रम १० करोड डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै हुनेछ । चीनको इन्स्टिच्यूट अफ फिजिकल साइन्सका वैज्ञानिकहरुका अनुसार कृत्रिम सूर्यको अहिले परीक्षण चलिरहेको छ । यसलाई द एक्सपेरिमेन्टल एडभान्स सुपर कन्डक्टिङ टोकामाक अर्थात् इस्ट नाम दिइएको छ । कृत्रिम सूर्यमा न्यूक्लियर फ्युजन क्रिया हुनेछ ।
यसले सौर्यमण्डलको मध्यमा अवस्थित कुनै ताराको रुपमा उर्जा भण्डार उपलब्ध गराउनेछ । यो कृत्रिम सूर्यले उत्पन्न गर्ने ऊर्जालाई विशेष प्रविधिबाट पर्यावरणका लागि सुरक्षित हरित उर्जामा परिवर्तन गर्न सकिनेछ । यसले धर्तीमा ऊर्जाको बढ्दो संकटलाई कम गर्नेछ । यसलाई ऊर्जाको वैकल्पिक श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यो कृत्रिम सूर्य एक मेसिनको रुपमा हुनेछ । यो डुनोट आकारको हुनेछ । परमाणु विखण्डन प्रतिक्रियाका माध्यमबाट तापक्रम उत्पन्न हुनेछ । यो कृत्रिम सूर्य एक दिनका लागि सञ्चालन गर्न कीब २० लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने बताइएको छ । अहिले यो कृत्रिम सूर्यवाला मेसिनलाई चीनको अन्हुई प्रान्तस्थित साइन्स टापुमा राखिएको छ ।
कृत्रिम सूर्य बनाउनका लागि हाइड्रोजन ग्यासलाई ५ करोड डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा तताएर त्यसको तापक्रम १०२ सेकेण्ड सम्म स्थिर राखिन्छ । त्यसबाट हाइड्रोजन हिलियममा परिणत हुन्छ र ठूलो परिमाणमा ताप र प्रकाश निस्किन्छ ।